Gold price stable(Gold price stable) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाउ स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको भाउ गत शुक्रबारको तुलनामा आज स्थिर रहेको हो। आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९३ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ। गत साता शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा १०० रुपैयाँ बढेर प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार २०० रुपैयाँ र...
आज कतिमा भइरहेको छ सुनको कारोबार ?
काठमाण्डौ । यो साता लगातार दुई दिनदेखि सुनको भाउ स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज मंगलबार पनि सुनको भाउ स्थिर रहेको हो। सुनको भाउ हिजो पनि स्थिर नै रहेको थियो। महासंघका अनुसार आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार ७०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९४ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो पनि सुनको भाउ यही नै थियो। गत...
आज सुन कतिमा कारोबार हुँदैछ ?
काठमाण्डौ । निकै उतारचढावबीच आज बुधबार सुनको भाउ स्थिर रहेको छ। यो साता लगातार दुई दिन घटेर हिजो मंगलबार ह्वात्तै बढेको सुनको भाउ आज बुधबार भने स्थिर रहेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज प्रतितोला फाइन गोल्ड १ लाख ४०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९९ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो मंगलबार तोलामै २ हजार २०० रुपैयाँ बढेर...